- looga gudbo marxaladda dagaal oogayaasha taasoo ku caan baxday ku tumashada xuquuqda aadanaha iyo xorriyaadka aasaasiga ah ee muwaadinka sababtayna dib u dhac dhinac kasta leh
- loo daboolo baahida baniaadamnimo ee muwaadinka sida la tacaalidda gaajada ,cudurada,jahliga iwm.isla mar ahaantaa loo soo celiyo loona hormariyo adeegyadii bulshada ee lagama maarmaanka ahaa sida caafimaadka waxbarashada,jidadka iwm
- loogu tallaabsado hormar ballaaran oo taabanaya dhinacyada beeraha,kalluumaysiga,xoolaha loona helo aqoon sare oo ku qotonta cilmi baaris,loogana hortago xaalufinta deegaanka iyo baddaba
- wax looga qabto xaaladda dhaqan habawga ah ee soo wajahday da’yarta soomaaliyeed,iyadoo in badan oo kamid ah ay seegtay waxbarasho,kuwa kalana ay shaqo la’ yihiin.
- looga hortago musuqmaasuq,eex,qabyaalad iwm taasoo ragaadisay maamuladii hore sababayna xaaladda hadda la marayo looguna badalo daacadnimo hawlkar iyo hufnaan.
- loo soo celiyo midnimadii iyo wadajirkii ummadda,meeshana looga saaro soo noqoshada khaladaadkii sababay kala go’a
- dhidibada loogu taago nidaam dimuqraadi ah oo tusaal fiican noqon kara,isla marahaantaa salka ku haya dhaqanka suuban ee bulshada.
- loo yagleelo nabad iyo xasilooni waarta oo ka mashxaradda geeska afrika taasoo ku qotonta istixgelin is ixtiraam iyo iskaashi ummadeed iyo mid maamulba.
- Loo soo celiyo kaalinta soomaaliya ku lahayd gobolka iyo caalamka.
- looga hortago xaalufinta deegaanka iyo baddaba.
iyadoo laga amba qaadayo xaqaa’iqa kor ku xusan waxay Xaruntu soo jeedinaysaa in:
- la taaba geliyo nabadda iyo isdhexgalka deegaanada kala geddisan taasoo ay ka qayb qaadanayaan hoggaanka dhaqanka,ururada bulshada, aqoonyahanka, dhalinyarada ,haweenka, siyaasiyiinta, taasoo ay dhiiri gelinayaan maamulada deegaanadu.
- dhidibada loo taago hay’adaha dhaqan-gelinta sharciga sida booliiska,maxkamadaha iyo xabsiyada, iyadoo la tixgelinayo kaalinta sarrayneed ee sharcigu leeyahay
- la dardargeliyo hawlaha maamul u samaynta degaanada aan hore u lahayn, ,hawlahan oo ay tahay inay iska kaashadaan DFKMG,ururada bulshada oo ay tahay inay door muuqda ka qaataan si loo helo qorshe dhamaystiran oo ku aadan maamul wadaag ,iyo maamul wanaag .
- in dadaal weyn loo galo sidii maamulka soomaliland loogu qancin lahaa dib ugu soo noqoshada xayndaabkii midnimada taasoo loo marayo wadahadal,wadatashi iyo damaanado caddaladeed.
- in la sameeyo haya’do la dagaalama eexda iyo musuqmaasuqa kuwaasoo qabanqaabiya siminaaro ku saabsan dhibataada ka iman karta taasoo ay wehliso abaalmarino iyo ciqaabo ku wajahan caddaladda iyo eexda sida ay ukal horeeyaan.
- in la abaabulo doodo siminaaro iyo aqoon isweydaarsiyo ku wajahan ahmiyadda dimuqraadiyad ka hana qaadda dalka taasoo dhawraysa ,kaalinta muhimka ah ee xoriyadda hadalka ,xoriyadda fikirka ,iyo dhaleeceynta turxaan bixinta ah.
- in la sameeyo kulamo ,doodo iyo aqoon isweydaarsiyo ku wajahan timaadada geeska afrika iyadoo maanka lagu haynayo aayaha ay wadaagaan ummadaha geyigu
- in isbedel wax ku ool ah lagu sameeyo manhajka waxbarasho ee dalka si loogu saleeyo qiyamka dhaxalgalka ah ee bulshada iyo danta guud ee ummadda, isla mar ahaantaa la dhiiri geliyo macaahida xirfadaha si loo tayeeyo shaqada iyo shaqaalah loona xadido heerka shaqo la’aaneed.
- in la abaabulo hawlo iskaa wax uqabso oo dadweynuhu waqtigooda iyo hantidoodaba ku taageerayaan soo celinta adeegyadii kala duwanaa iyo waliba in la sameeyo yaboohyo caalami ah oo lagu taageerayo hawlahaas.